राजनीति सत्ता प्राप्तिको लागि होईन् सकरात्मक परिर्वतनको लागि हो– नेता भट्टराई — News of The World
संसार न्यूज संवाददाताभाद्र २, २०७४
पछिल्लो समय युवाहरुमा राजनीति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । नेतृत्व तहमा सत्ता प्राप्तिको लागि गरिने अस्वभाविक खेल होस या मोनोपोलिक राजनितिक संस्कार होेस जसले गर्दा युवा वर्गले राजनितीलाई फोहोरी खेलको संज्ञा दिदैँ राजनितीबाट टाढिन खोजेको दखिन्छ । देशमा शैक्षिक बेरोजगारीले विकराल रुप लिदैँ छ जसले गर्दा युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ ।
वर्तमान समयमा युवा वर्गहरुमा देखिएका यी र यस्तै यावत समस्याहरुको विषयमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको धरोहर संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा विगत सत्र वर्ष राजनिति गर्दै आउनु भएका ईमान्दार व्याक्तित्व नेविसंघका केन्द्रिय सदस्य आरसी भट्टराई सँग गरिएको कुराकानी तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाई नेविसंघमा आवद्ध हुनुभएको कति वर्ष भयो ?
म विगत १७ वर्ष देखि नेविसंघको राजनितिमा सक्रिय छु । विंस २०५८ साल देखि निरन्तर रुपमा सक्रिय भएर नेविसंघमा लागे परेको छु ।
नेविसंघको कुन कुन पदमा रहेर काम गर्दै आउनु भएको छ ?
५८ कुमारवर्ती मल्टिपल क्याम्पस कावासोतीको सचिव, ६१ मा नवलपरासी जिल्ला कार्य समिति सदस्य, ६३ सालमा समेत नवलपरासी जिल्ला कार्यसमिति सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि ६६ सालमा त्रिचन्द्र कलेजको नेविसंघ उपाध्यक्ष, ६९ सालमा नेविसंघ नवलपरासी काठमाडौैँ सम्पर्क समिति अध्यक्ष, २०७३ साल साउन देखि नेविसंघको निर्वाचित केन्द्रिय सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छु ।
तपाईलाई नेविसंघ नै हुन के कुराले प्रेरित ग¥यो ? के कारणले नै कांग्रेस बन्न प्रेरित ग¥यो ?
मैले २०५६ सालमा विपीको जेल जर्नल भन्ने पुस्तक पढ्ने अवसर पाए । त्यसमा विपी बाबुले विद्यार्थी काल देखि छात्र बास आन्दोलन देखि नै भारतमा भएको भारत छोडो आन्दोलनमा महात्मा गान्धीको सर्मथन गर्दै आउनु भएको रहेछ । यस्तै नेपालकै सन्र्दभमा पनि विगतमा भएका विभिन्न परिवर्तनको नेतृत्व नेविसंघले नै गर्दै आएको कारणले नेविसंघमा लाग्न अभिप्रेरित भए ।
तपाईलाई कांग्रेसको मन पर्ने नेता एक दुई तीन गरेर भनिदिनु न ?
२) गिरिजाप्रसाद कोईराला
३) रामचन्द्र पौडेल
६२ \_६३ को परिवर्तनकारी आन्दोलनमा तपाई नेविसंघको विद्यार्थीको हैसियतमा कस्तो भुमिका निभाउनु भयो ?
६२ \_६३ को आन्दोलनमा म नवलपरासीमा कार्यरत थिए । नेविसंघको जिल्ला सदस्यको रुपमा रहेर लुम्बीनी कुमवर्ती मल्टिपल क्याम्पसका विद्यार्थी साथीहरुलाई समेट्दै गाउँ गाउँमा गएर आन्दोलनमा सरिक हुनको लागि आह्वान गर्दै ६२\_ ६३ सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय भुमिका निभाएको थियौँ । यस्तै गरि विभिन्न समयमा भएको परिवर्तनकारी आन्दोलनको बेलामा नवलपरासी तथा त्रिचन्द्र कलेजमा सक्रिय हुदाँ ३ पटक सम्म पुलिसको गिरपm्तारीमा परेको छु ।
तपाई अहिले राजनिती बाहेक कुनै पेसामा आवद्ध हुनुहुन्छ कि ?
प्रारम्भिक रुपमा ६३\_६४ सालमा त काम गरेको थिए विगतमा शिक्षण पेसा तथा गैह्र सरकारी संस्थामा कार्यरत थिए तर अहिले सेवा नै धर्म हो भन्ने मान्यताका साथ सामाजिक काममा सक्रिय छु ।
राजनितिमा आउन चाहाने विद्यार्थीले नेविसंघ नै रोज्नुपर्ने कारण बताईदिनुस न किन अरु विद्यार्थी संगठन भन्दा नेविसंघ के कुरामा पृथक छ ?
अहिलेको उत्तरआधुनिक कालमा विद्यार्थीले आफै बुझ्न पर्ने कुरा हो । अहिले सममको परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व नेविसंघले गर्दै आएको छ । कलेजहरुमा देखिएको बेथितीहरु, फि लिने कुराहरु छात्रवृत्तिका कुराहर विदयार्थी हकहितका कुरामा नेविसंघले अग्रणी भुमिका खेल्दै आएको छ । प्राईभेट कलेजहरुले ढाड सेकिने गरि शुल्क लिने कुराको विरोध गर्दैै सहज पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने विषयमा कलेज प्रशासन संग माग गर्ने कुरा होस जुनसुकै विषयमा नेविसंघले सधै आवाज उठाउदै आएको छ । यसै गरि स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयहरु, विकास निर्माणका विषयहरु ज्स्ता विषयमा नेविसंघले जहिले पनि परिवर्तनकारी भुमिका खेल्दै आएको छ । राजनितिलाई समाज सेवाको रुपमा विकास गर्दै जहिले पनि नेविसंघले जहिले अग्रगामी भुमिका खेल्दै आएको छ । तर्सथ विद्यार्थीले नेपाल विद्यार्थी संघ नै रोज्नु पर्छ ।
वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा विद्यार्थीहरु पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । अध्ययनको लागि विदेश जाने र उतै बस्ने परिपाटीले देशका शिक्षित वर्गहरु देशले गुमाउदै छ । यस्तो स्थिती लाई नियन्त्रण गर्न तपाईहरु मौन देखिए जस्तो छ नि ?
त्यो कुरामा हामी मौन बसेका छैनौ । हामी ले देशमै गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विभिन्न किसिमका पहलहरु ग्दैृ आएका छौँ । पछिल्लो समय युवा पिडिहरु विदेश जाने क्रम बढ्दो छ त्यो सत्य हो । देशमा प्राविधिक शिक्षाको कमी हुनु,मुख्य कुरा त नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारको सङख्या बढ्दो छ जसकारण युवा पिडिमा एक प्रकारको निराशा उत्पन्न भएको छ । त्यसैले हरेक वर्ष लाखौैँ सङख्यामा विद्यार्थीहरु पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । यसलाई रोक्न नेपालमै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनु पर्छ । देशमै रोजगारको अवसर सिर्जनाको लागि नेपालमा भएका प्राकृतिक तथा खनिज सम्पदाको प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ । तयसको लागि हामीले पटक नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउदैँ आएका छौँ ।
पछिल्लो समयमा युवा पिडी माझ राजनिति प्रति वितृष्णा बढ्दो छ । युवा पिडीहरु राजनितिलाई फोहोरी खेल भन्दै पन्छिएको अवस्था छ यस अवस्थामा नेविसंघले युवाहरुलाई राजनितिमा स्थापित गराउनलाई कस्तो भुमिका खेल्दै छ ?
युवाहरुलाई राजनितिमा स्थापित गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । अहिलेको पस्थितीमा धेरै राजनितिक दल, मोनोपोली राजनितिक संस्कार, सरकार बनाउने र गिराउने खेल, राजनितिक दलबीच सत्ता प्राप्तिको लागि हुने गरेका अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा जस्ता कारणले युवाहरुमा राजनितिक वितृष्णा आउनु स्वभाविक हो । तर त्यो कुरामा अरुले के गरे भन्दा नि हामीले के ग¥यौ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ । हामीले विद्यार्थी संग सम्बन्धित कुराहरु, युवा स्वोरोजगार सम्बन्धित कुराहरु समेटेर कार्यक्रमहरु बनाएका छौँ । हामीले हरेक युवा राजनितिमा लाग्नै पर्छ भन्ने भन्दा पनि हरेक युवाले राजनितिक ज्ञान चाहि हुनुपर्छृ भन्ने मान्यता राखेका छौँ । राजनितिलाई गरि खाने भाँडो भन्दा पनि एउटा समाज सेवाको रुपमा लिने संस्कारको विकास गर्न चाँहान्छौ । राजनिति भनेको सकरात्मक परिवर्तनको लागि हो सत्ता प्राप्तिको लागि होईन भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै राजनितिलाई समाज सेवाको रुपमा स्थापित गराउन चाहान्छौँ ।
आगामी दिनहरुमा युवा स्वोरोजगार, प्राविधिक शिक्षामा जोड, युवा पंक्तिहरुमा गुणस्तरीय तथा सिपमुलक शिक्षामा जोड दिएका छौ । विगतमा सेमेष्टर प्रणाली शिक्षा, कलेजहरुले मनोमानी ढंगले फि उठाउने कुरा नियन्त्रण लगायतका विषयहरु नेविसंघकै नेतृत्वमा भएको हो । हामीले बोल्ने भन्दा पनि काम गरेर देखाउछौँ अनि भन्छौँ । अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
तत्कालको प्रसंगलाई जाडौँ । अहिले देशका विभिन्न ठाउमा बाढी आएको अवस्था रहेको छ । नेपाल विद्यार्थी संघ जस्तो गरिमामय विद्यार्थीको संगठनले बाढी पिडितको राहत तथा उद्दारको लागि के के गर्दैै हुनुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त विनाशकारी बाढी पहिरोले ल्याएको विपत्तीले म अनि पुरै संगठनलाई निकै मर्माहत तुल्याएको छ । बाढी पहिरोमा जन गुमाउने सम्पुर्णमा हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गर्न चाहान्छु । विपत्तीमा परेको बेला हामी सबै एक भएर लागि पर्नु पर्दछ । हामीहरु बाढी पिडितलाई राहत तथा उद्दारको लागि अभियानकै रुपमा लागि परेका छौँ । देशै भरिका विभिन्न क्याम्पसमा रहनु भएका नेविसंघका विद्यार्थी सथहिरुलाई समेत राहत वितरण तथा उद्दारमा खट्नको लागि पहल गरेको अवस्था छ । हामीले अहिले अभियान नै चलाएर रात संकलन काम गरिरहेका छौँ । बाढी पिडितको लागि उचित उद्दार तथा राहत वितरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई समेत दबाब दिदैँ आएका छौँ ।